Fanakanan-dalana sy fanafihana tany Morafenobe : nirongo odigasy marobe ireo dahalo nitifitra ilay zandary | NewsMada
Fanakanan-dalana sy fanafihana tany Morafenobe : nirongo odigasy marobe ireo dahalo nitifitra ilay zandary
Par Taratra sur 21/05/2016
Natao veloma farany sy nomem-boninahitra, tetsy amin’ny Toby Ratsimandrava, nialoha ny nitondrana ny nofo mangatsiakany any Fianarantsoa, afakomaly, ilay zandary G1C Randrianandrasanirina Hajatiana Anicet, maty notifirin’ny dahalo, tany Morafenobe, ny 17 mey lasa.
Herin’ny maizina sa fanova-maso? Ireto hita amin’ny sary ireto ny odigasy marobe sy mohara tratra tany amin’ireo dahalo roa lahy izay nitifitra ny G1C Randrianandrasanirina Hajatiana Anicet, zandary niasa tao amin’ny Bianco ao Mokara, fokontany Ankalalo, kaominina ambanivohitr’i Beravina Morafenobe.
Tena misy, araka izany, ny dahalo fa tsy araka ny fiheveran’ny maro azy hoe sarimihetsika foronina tsotra izao, toy ny fieritreretan’ireo minia tsy mahita ny fahoriana iainan’ny mpitandro filaminana amin’ireo faritra mena anjakan’ny asan-dahalo. Efa maro ireo zandary lavon’ny dahalo tany amin’ny faritra atsimo. Tena sahy mifampihantsy amin’ny mpitandro filaminana mihitsy ry zalahy? Matoky ny herin’ny odigasy eo am-pelatanany koa izy ireo ka tsy mitsitsy mihitsy manoloana ireo mpitandro filaminana manara-dia. Misy dikany avokoa ireny odigasy ireny amin’ny dahalo; toy ny fampiasana tandrok’omby asiana vovo-paty tsindronina hety eo ambony ampiarahana amin’ny lamba mena. Tsy nandaitra anefa izany teto satria noraisim-potsiny izy ireo nandritra ny fifampitifirana tamin’ny zandary.
Olana sedrain’ireo zandary matetika ny tsy fahafehezana ny toerana sy ny tsy fahampian’ny fitaovana eo am-pelatanana. Manginy fotsiny ireo mpitari-dalana miray tendro amin’ny dahalo. Toy ny fihetsika nasehon’ny lehiben’ny Dinabe manoloana ireo zandary nanara-dia dahalo tany Andranolava Ankazoabo atsimo, ny alatsinainy teo. Firaisana tsikombakomba? Tsy afa-manoatra, araka izany, ny mpitandro filaminana satria be noho vitsy manoloana ireo dahalo.
Misy mpamatsy fitaovam-piadiana…
Mitaintaina andro aman’alina ny mponina any amin’iny faritra Melaky iny manoloana ny firongatry ny asan-dahalo tsy ahitam-bahaolana ity na eo aza ny ezaka ataon’ny zandary any an-toerana izay miafara amin’ny famoizana aina mihitsy. Miparitaka rahateo ny fitaovam-piadiana izay voalaza fa misy mpamatsy izy ireo. Raha ity trangana fanafihan-dahalo tany Morafenobe farany teo ity, ny rain’ny iray amin’ireto dahalo ireto ihany no namatsy fitaovam-piadiana ireo dahalo.
Misy ifandraisany amin’ireny fahavakisan’ny fonja tany Toliara ireny ity raharaha ity? Mbola miriaria any rahateo koa ireny gadra tafatsoaka ny fonja ireny ka mety mitohy indray ny asa ratsiny?
Mbola mitohy ny fikarohana ireo dahalo tafaporitsaka nandritra ny fifandonana tamin’ireo zandary avy ao Morafeno sy avy ao Beravina izay notarihin’ny kaomandin’ny kaompania.
Fotoana izao tokony handraisana andraikitra sy hitadiavam-bahaolana maharitra hamongorana ny asan-dahalo fa tsy vitan’ny resaka ambony latabatra ny raharaha toy izao satria raharaham-pirenena mihitsy ity asan-dahalo ity fa tsy vitan’ny mpitandro filaminana ireny.